सम्बन्धहरु किन यसरी सकिदैछन् ? एक पटक पढ्नै पर्ने - Muldhar Post
सम्बन्धहरु किन यसरी सकिदैछन् ? एक पटक पढ्नै पर्ने
पत्रपत्रिकाट २०७५, २३ माघ बुधबार 850 पटक हेरिएको
पत्नी ट्रयाक्टर ड्राइभरसँग आपत्तिजनक अवस्थामा बसेको फोटो बोकेर सम्बन्ध बिच्छेदका लागि श्रीमान गुहार्न पुगेका ठेकेदार सूर्य तामाङले अदालतबाट फर्किएपछि पत्नीलाई भेट्न पाएनन् । दिलमायाले पति घर आइपुग्नु अघि नै विष पिएर ज्यान छाडिसकेकी थिइन् ।
माघ ९ गते नेपालटार, जरङ्खुमा भएको घटना हो यो । न्याय खोज्न दिलमाया माइती नेपाल पुगिन् । त्यहाँ पति सूर्यलाई पनि बोलाएर छलफल गर्दा भदौ १ गतेदेखि जारी कानुनका आधारमा दिलमाया तल परिसकेको भनेपछि मिलापत्रको कुरा आयो ।
त्यसअघि बालाजु प्रहरीले छलफलका लागि बोलाउँदा गल्ती स्वीकारिन्, तर सम्बन्ध बिच्छेद गर्न मानिनन् । त्यसपछि पति सम्बन्ध बिच्छेदका लागि वकिलकहाँ पुगे । माइती नेपालमा आफू तल परेको र अलग्गै बस्नका लागि पतिले केही खर्च दिन्छु भनेको आधारमा ५० लाख मागिन् ।
तर, पतिले तीन लाख र कोठामा भएको त्यति नै बराबरको जिन्सी सामान पनि छाडिदिने भने । दिलमायाले मानिनन् र १० लाखमा झरिन् । सूर्य तीनबाट पाँच लाखमा उक्लिए । बेलुका गाउँबाट एक आफन्तले अर्को एक लाख थपिदिन भनेपछि सूर्यले हुन्छ भने । भोलिपल्ट वकिलकहाँ जाने, मिल्नेमा दुबै पुगे ।
तर, दिलमायाले ‘विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र भेटिएन, टेस्टको सर्टिफिकेट पनि गाउँमा छ’ भन्दै सूर्यलाई गाउँ पठाइन् । तर, गाउँ नपुग्दै फोन गरेर दुबै चिज यहीं भएको बताई फिर्ता बोलाइन् । त्यसदिन अदालतमा पेशी थियो । प्रतिवादी ९दिलमाया० ले तारेख गुजारेका कारण एकतर्फी फैसला हुने लगभग निश्चित थियो ।
तर, उनले ‘मिलापत्र गरौंला, अहिले कोठा आउनु’ भनी बोलाइन् । सूर्य कोठा गएनन्, अदालत पुगे । अदालतले सूर्यको मागबमोजिम सम्बन्धबिच्छेद पनि सदर गर्‍यो । अदालतबाट निस्कन नपाउँदै फोन आयो, ‘दिलमायाले विष पिइन्’ भनेर । अस्पताल पुग्दासम्म दिलमायाले संसार छाडिसकेकी थिइन् । बिहान ८ वर्षको छोरालाई स्कुल पठाएर कोठैमा विष पिएकी हुन् ।
यस्तो सघन सम्बन्धहरु टुट्न थालेपछिको विरक्तिले आर्यघाटसम्म पुर्‍याउँदो रहेछ । चाहे ठेक्कापट्टाको काम गर्ने सूर्य तामाङकी पत्नी हुन्, चाहे वनमन्त्रीकी भतिजी बबिता नै किन नहुन्–मनको चोटले ज्यानको माया मार्दोरहेछ ।
यस्तै त हैन, तर पति पत्नीबीच स–साना कुरामा मतैक्यता नहुँदा वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतकी भतिजी बबिताले विवाह गरेको तीन वर्षपछि आइतबार ललितपुरको आफ्नै अपार्टमेन्टमा सलको पासो बेरेर आत्महत्या गरिन् । लोग्ने–स्वास्नीको झगडा परालको आगो भनेझैं सामान्य विषयमा पतिसँग मन दुखाएर उनले केटौले निर्णय लिएको दाइ मुक्तिलगायत परिवारका सदस्यहरु बताउँछन् ।
उनले केही समययता सामाजिक सञ्जाल र केही निकटस्थ साथीसँग म्यासेञ्जरमा आफ्ना विरक्ति भावहरु पोख्दै आएकी थिइन् । पति काममा व्यस्त, समय दिन नभ्याउने, उमेर अन्तर, केटी इगोइष्ट स्वभावकी । सँगै विदेश यात्रामा पनि गएकै हुन् । खासै समस्या केही थिएन । आइतबार उनीहरु बस्ने बालकुमारीको अपार्टमेन्ट पास गर्ने कुरा थियो । राति पति पत्नी सँगै बसेर लुँडो खेलेका थिए । खेल्ने क्रममा सामान्य विवाद भएको थियो । भोलिपल्ट बिहानै पति दुई हजार डलर साँट्छु भनी हिंडे । त्यसपछि पत्नीले मृत्युको बाटो रोजिन् । जनआस्था साप्ताहिकबाट साभार गरिएको हो ।